Xinhua Myanmar - ဘိုင်ဒန်အစိုးရက အမေရိကန်-အာဖဂန် တာလီဘန် သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ထပ် ပဋိပက္ခ နှင့် သွေးထွက်သံယိုမှု မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်း ပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ် မေလ သို့မဟုတ် ဇွန်လတွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ ဆင်းသက်နိုင်မည်
C919 လေယာဉ်ကို China Eastern Airlines လေကြောင်းလိုင်းသို့ ပထမဦးဆုံး ပေးပို့
အမေရိကန်-မက္ကဆီကိုနယ်စပ်တွင် အမေရိကန်က ထိန်းသိမ်းထားသည့် တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် (၁)သိန်းနီးပါးရှိ
ကမ္ဘာ့စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းက အင်အားလျော့နည်းလူအုပ်စုများအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များက သတိပေး
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ပြည်တွင်း ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးနောက် ပုံမှန်ဘဝနေထိုင်မှုအသစ်ထဲ ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် ပြင်းအား ၈.၁ ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ဆူနာမီသတိပေးအဆင့်လျှော့ချ၊ ဘေးကင်းရာပြောင်းရွှေ့ရေးညွှန်ကြားချက်များ ဖြေလျှော့
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ လေကြောင်းပြပွဲ အကြိုစမ်းသပ်ပျံသန်းမှုတွင် စစ်ဖက်ရဟတ်ယာဉ်များ စွမ်းရည်ပြသ
(နိုင်ငံတကာကပ်ရောဂါသတင်းစုစည်းချက်) အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံအများတွင် တစ်ရက်အတွင်း COVID-19 ရောဂါထပ်မံကူးစက်ခံရမှု စံချိန်သစ်ဖြစ်ပေါ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆီနာဘန်းမီးတောင် ပြင်းထန်သည့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
အာဖဂန်နစ္စတန် အမေရိကန်နိုင်ငံ တာလီဘန် ဂျိုးဘိုင်ဒန်
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ရှိ အမေရိကန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) North America
ဝါရှင်တန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
အမေရိကန်နိုင်ငံက ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော အာဖဂန် တာလီဘန်နှင့် သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
အမျိုးသား လုံခြုံရေးအကြံပေး Jake Sullivan က ၎င်းနှင့် အာဖဂန် အမျိုးသား လုံခြုံရေးအကြံပေး Hamdullah Mohib နှင့် ယင်းနေ့အစောပိုင်းကတွင် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ယင်းအစီအစဉ်ကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အိမ်ဖြူတော် ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
တာလီဘန်များအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်ရန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် အကြမ်းဖက်မှု လျှော့ချရန်နှင့် အာဖဂန်အစိုးရနှင့် အခြားသောဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လေးနက်သော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ရန် ဟူသော ၎င်းတို့၏ ကတိအတိုင်း နေထိုင်ခြင်းရှိမရှိကို အမေရိကန်နိုင်ငံက အကဲဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Sullivan က ပြောခဲ့သည်။
“မစ္စတာ Sullivan က အာဖဂန်နစ္စတန်အတွက် တည်ငြိမ်ပြီး၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် စိတ်ချမှုရှိတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခု ပံ့ပိုးပေးဖို့ စုပေါင်းမဟာဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အာဖဂန်နစ္စတန် အစိုးရ၊ နေတိုးမဟာမိတ်တွေ၊ ဒေသဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တွေနဲ့ အနီးကပ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ ကတိပြုထားပါတယ်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်က ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် တာလီဘန်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းက သဘောတူညီချက်တစ်ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း၊ တာလီဘန်အနေဖြင့် သဘောတူညီချက်ပါ အခြေအနေများဖြင့် ကိုက်ညီပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်မှ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့များ အပြည့်အဝဆုတ်ခွာရန် သဘောတူညီချက်က တိုက်တွန်းထားကြောင်း သိရသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် အမေရိကန် စစ်သည် ၂,၄၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့သော စစ်ပွဲသည် အမေရိကန် သမိုင်းတွင် အရှည်ကြာဆုံး စစ်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် အကြီးတန်းအကြံပေးများက ပိုမို၍ သတိရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုထားခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏ သမ္မတသက်တမ်း နောက်ဆုံးလများအတွင်း စစ်သည်များ ဆုတ်ခွာရေး အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် အမေရိကန် စစ်သည်များကို အရေအတွက် ၂,၅၀၀ အထိ လျှော့ချပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်က ပင်တဂွန်က အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Jan. 22 (Xinhua) -- The White House said on Friday that the United States would review its agreement with the Afghan Taliban, which was signed in last February.
National Security Advisor Jake Sullivan told this plan in his phone conversation with his Afghan counterpart Hamdullah Mohib earlier in the day, according toaWhite House statement.
Sullivan said that the United States would assess "whether the Taliban was living up to its commitments to cut ties with terrorist groups, to reduce violence in Afghanistan, and to engage in meaningful negotiations with the Afghan government and other stakeholders."
"Mr. Sullivan committed to consulting closely with the Government of Afghanistan, NATO allies, and regional partners regardingacollective strategy to supportastable, sovereign, and secure future for Afghanistan," the statement added.
The United States and Taliban signed an agreement in late February 2020, which called forafull withdrawal of the U.S. military forces from Afghanistan by May 2021 if the Taliban meets the conditions of the deal, including severing ties with terrorist groups.
The war in Afghanistan, which has caused about 2,400 U.S. military deaths, is the longest one in U.S. history. The former President Donald Trump accelerated the pullout from the country in the final months of his presidency, though some of his senior aides had suggestedamore cautious approach. The Pentagon confirmed last week that U.S. troops in Afghanistan had reduced to 2,500 level. Enditem
U.S. soldiers guard at the site ofasuicide bombing in Kabul, Afghanistan, Feb. 26, 2015. (Xinhua/Ahmad Massoud)
Previous Article ထရမ့်အား စွပ်စွဲပြစ်တင်မည့် အကြောင်းအရာကို အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်က အထက်လွှတ်တော်သို့ပေးပို့
Next Article ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ပဲရစ်သဘောတူညီချက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြန်လည်ပါဝင်ရန် ဘိုင်ဒန် လက်မှတ်ရေးထိုး